Madaxweynaha Puntland oo loo kordhiyay mudada uu ku soo magacaabayo xukuumadiisa. – The Voice of Northeastern Kenya
Madaxweynaha Puntland oo loo kordhiyay mudada uu ku soo magacaabayo xukuumadiisa.
Wararka ka imaanaya magaalada Garowe ee Caasimada maamulka Puntland ayaa sheegaya in Madaxweynaha Cusub ee Maamulka Puntland Siciid Cabdulaahi Deni uu Maanta hortagay xildhibaanada Baarlamanka Maamulkaasi, isagoona u gudbiyay codsi ku saabsan in muddo kordhin loogu sameeyo wakhtiga uu ku soo magacaabayo golihiisa Wasiirada.
Madaxweynaha cusub ee maamulka Puntland ayaa codsaday in muddo Labo todobaad ah loogu daro Wakhtiga uu ku soo dhisayo xukuumadiisa.
Intaa kadib Mudanayaasha Baarlamaanka maamulka Puntland ayaa cod aqbaliyad leh ku meelmariyay codsiga madaxweynaha Maamulka Puntland waxaana loo ogolaada inuu mudadaas ku soo gudbiyo xukuumadiisa.
45 Xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Puntland ayaa Ogolaatay in waqti Kordhin loo sameeyo Madaxweynaha si uu u soo dhiso Xukuumadda, waxaa diiday 1 Xildhibaan, waxaana ka aamusay 4 Mudane sidaas ayuuna codsigaasi ansax ku noqday.
Madaxweynaha Maamulka Puntland ayaa hada haysta mudo dheeraad ah oo gaaraysa 14 Cisho Waxaana laga sugayaa waqtiga uu shaacin doono Golaha Wasiirada ee Maamulka goboleedka Puntland.
Dhanka kale gudiga amniga ee maamul goboleedka Puntland ayaa digniino u diray ciidamada hubka ku dhex qaata magaalooyinka waa weyn.
Gudiga amniga ee maamulka Puntland waxay sheegeen in gaadiidka iyo ciidamada hubka ku dhex qaadanaya magaalada garowe iyo magaalooyinka kale lagala wareegi doono.
Awaamiirta ay soo saareen gudiga amniga ee maamulka Puntland ayaa waxay ku soo aadayaan ayadoo lagu wado in 26 bishaan ay magaalada garowe marti galiso wafuud ka kala socota dowlada dhexe ee Soomaaliya iyo maamulada Xubnaha ka ah kuwaasoo la doonaya inay ka qayb galaan xaflada Caleema saarka ee madaxweynaha dhawaan loo doortay maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Saciid C/laahi Deni.
← Safiirka Indonesia ee Soomaaliya oo waraaqihiisa gudbiyay.
DHAGEYSO WARKA DUHURNIMO EE IDAACADA STAR FM 1.30PM 22/1/2019 →